यदि तपाईं विशाल मेट्रो शहर प्रेम, अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य देखि विशेष गरी त तपाईं प्रेम हुनेछ हङकङ टावर चीन सारा मा ऊंची तीन टावर आधारित स्लट खेल. यो5रील मोबाइल स्लट खेल ऊंची टावर तलको शहर सुन्दर दृश्य को पृष्ठभूमि मा सेट गरिएको छ. रंग विषय complements कि भयानक रात प्रकाश सबै नीलो छ. हावा उड्ने को ध्वनि र प्रहरी sirens बारम्बार ध्वनि संग तल व्यस्त ट्राफिक को आन्दोलन तपाईं ती टावर माथि उभिएका छन् महसुस बनाउन. खेल £ 0.20 को शर्त रकम र प्रति स्पिन अधिकतम कि £ 100 सम्म जान्छ संग खेलिन्छ.
हङकङ टावर विकासकर्ता बारेमा:
यो विकासकर्ता मोबाइल स्लट खेल एल्क गेमिङ छ, क्यासिनो उद्योग मा एक नवीन नेता अनलाइन प्रयोगकर्ताहरूको लागि धेरै रचनात्मक खेल उत्पादन गरिएको छ जो. आफ्नो सबै खेल लोकप्रिय र संसारभरि प्रयोगकर्ता द्वारा धेरै क्यासिनो साइटहरू र मोबाइल अनुप्रयोगहरूमा प्ले छन्.
यो खेल प्रतीक मोबाइल स्लट एक सुन समावेश 7, नीलो हीरा, एक लोटस फूल र एक बोनसाई ट्री कि स्लट को शीर्ष मूल्य आधार प्रतीक गठन. नम्बर7सुनको उच्चतम संग तिर्ने छ 1500 पटक संग खम्बा5एक payline मा प्रतीक landings. त्यहाँ पाँच अनियमित रंगीन चिनियाँ कम मूल्य हुन्छन् कि प्रतीक हो. संग नीलो साथ खेल लोगो & रातो यिन-yangs खेलको बोनस प्रतीक प्रतिनिधित्व.
रहस्य विशेषता प्रतीक: जब खेल लोगो प्रतीक तीन को रील ढाक्न एक स्ट्याक्ड गठन देखा, अर्को प्रतीक प्रकट गर्न घूमती. यो पनि नीलो यिन-यांग मा प्रकट गर्न सक्छन् र त्यतिबेला, तपाईं संग बोनस स्तर साथ खेल्न प्राप्त2Jackpot विजेता मौका लागि अतिरिक्त जीवन.
बोनस खेल प्रवेश: रातो यिन-यांग को स्क्याटर प्रतीक र तीन वा तिनीहरूको अवतरण बढी छ बोनस खेल ट्रिगर. चार landings तपाईं अतिरिक्त जीवनको बोनस खेल प्रवेश र साथ पाँच landings दिन2अतिरिक्त जीवन को Jackpot राउंड्स खेल्न.
आकाश को पाङ्ग्रा: यो यस को Jackpot खेल छ मोबाइल स्लट यसमा उल्लेख stakes को संख्या एक विशाल पाङ्ग्रा स्पिन गर्न तपाईं कहाँ प्राप्त खेल. यहाँ तीन स्तरहरू छन्; पहिलो स्तरले एक अधिकतम जीत प्रदान गर्दछ 2000 पटक खम्बा पछि 10,000 पटक दोस्रो स्तर र तेस्रो र अन्तिम स्तर मा खम्बा एक whopping जीत एक मौका प्रदान गर्दछ 50,000 पटक आफ्नो खम्बा.
यो मोबाइल स्लट खेल धेरै बोनस सुविधाहरू तपाईं लाभ उठाउन सक्छौं साथ विजेता stakes को उच्चतम नम्बर प्रदान गर्दछ. यदि यो स्लट मा केही spins प्ले तपाईं निश्चित केही ठूलो पैसा जीत आशा गर्न सक्छौं.